Wasiir Cawad: Kulamada goonigoonida ee Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaal dalal Afrika (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiir Cawad: Kulamada goonigoonida ee Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaal dalal Afrika (dhegayso)
Febraayo 11, 2019 3:23 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya Md. Maxmed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya shirka 32aad ee madaxda Midowga Afrika maanta ugu soo xirmaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, ayaa haddana waxaa taas barbar socday shirar gaargaar ah oo Madaxweyne Farmaajo uu la yeelanayey qaar ka mid ah madaxda shirkaas ka qaybgalaysa.
Waxaa maanta Madaxweyunuhu la kulmay hoggaamiyeyaasha waddamada Itoobiya, Jabuuti, Suudaan, Geni iyo Koonfur Afrika. Hadaba waxyaabaha ay daaranaayeen kulamadaas gooni-goonida ah ee dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda waddamadaas waxaa Radio Daljir uga warramay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaliya Axmed Ciise Cawad oo kamid ah waftiga Madaxweyne Farmaajo ee shirkaas ka qaybgalaya.
Wasiirku waxa uu u warramay Axmed Sh. Max’ed “Tallman” oo ku sugan Daljir Bossaso.
Walaac laga qabo bixitaanka ciidamada Amisom ee G/Shabeelha dhexe